राति ट्याक्सी चढ्ने युवती ड्राइभरलाई भन्छन्, ‘पैसा छैन, बरु सेक्स गर’ — Paschimnews.com News From Nepal
राति ट्याक्सी चढ्ने युवती ड्राइभरलाई भन्छन्, ‘पैसा छैन, बरु सेक्स गर’
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७४/९/२४ गते
विज्ञान तामाङ ।
सर्लाहीको मलंगवा, अहिले काठमाण्डु जोरपाटीको माकलबारी बस्छु ।
बूढो भइयो, (हाँस्दै) ३६ पुगें ।
घरमा को–को हुनुहुन्छ ?
श्रीमती, एउटा छोरा, एउटी छोरी र म ।
ट्याक्सी चलाउन थालेको कति भयो ?
११ वर्ष ।
कमाई कस्तो छ ?
साहुलाई बुझाएर दिनमा ५–६ सय बच्छ । लामो ट्रिप पाइयो भने कुनै दिन हजार पनि पुगिहाल्छ ।
साहुलाई कति बुझाउनुपर्छ ?
रातिको ६ सय ।
ट्याकसी चलाएर परिवार पाल्न पुगेको छ ?
पुगेकै छ भन्नुपर्छ । विदेश जानुभन्दा यही ठीक छ । कहिले काहीं पुगेन भने गाउँबाट चामल ल्याएर खान्छु ।
रातिमा ट्याक्सी चलाउँदा सुरक्षाको डर हुँदैन ?
हुँदैन । पहिलापहिला त ‘डेन्जर’ हुन्थ्यो । अहिले सुरक्षा राम्रो छ । म तीनपटक लुटिएको छु ।
ट्याक्सी चढ्थे, पछि भएकै पैसा लुटेर जान्थे ।
ट्याक्सी चढेर पैसा नदिने कत्तिको भेटिन्छन् ?
त्यस्ता पनि हुन्छन् । पहिला त कति भयो कति त्यस्ता घटना । अहिले कलिकति कम छ ।
पैसा दिएन भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्नुहुन्न ?
रातिको समय हुन्छ । एकान्तमा गएपछि लफडा गर्छ । पुलिस खोज्न थाल्नु कि ज्यान जोगाएर भाग्नु ? पुलिस त राति बोलायो भने बिहानतिर पुग्छ ।
पैसा दिन्न भन्नेहरु कस्ता मान्छे हुन्छन् ?
गुण्डा टाइपका केटाहरु । धेरैजसो त केटीहरु हुन्छन् ।
कस्ता केटी ?
म प्रायः ग्राहक कुरेर ठमेलतिरै बस्छु । यहाँ राम्रा–नराम्रा सबै खाले मान्छे आउँछन् । हेर्दा स्मार्ट देखिन्छन् । लिएर गयो । ट्याक्सीबाट झरेपछि दाई पैसा छैन, बरु एकपटक सेक्स गर्नुस् भन्छन् । त्यस्तो कुरा कसरी गर्न सकेका होलान् । लाजै मान्दैनन् भन्या ।
त्यसो भए मस्ती गर्नु भो ?
धत्तेरी । कहाँ त्यस्तो कुरा गर्नुभएको ? उनीहरुले भन्ने मात्र हो । म जान्न । बरु सम्झाएर पठाइदिन्छु । पैसा भएको बेलामा देउ भनेर छाडिदिन्छु ।
खै ! गफै दिएजस्तो लाग्यो ?
रामोराम हो । म त कान समात्छु । कस्ता केटी हुन्, कस्ता । एड्स लाग्यो भने के गर्ने ? गाउँमा एड्स लागेको थाहा भयो भने गाउँमा ‘फलानाको छोरा यस्तो रे’ भन्ने हल्ला चल्छ । त्यस्तो बेलामा बाँच्नुभन्दा मर्नु नै बेस हुने अवस्था आउँछ ।
अहिले पनि पैसाको सट्टा ‘सेक्स गर्नुस्’ भन्नेहरु भेट्ने गर्नुभएको छ ?
(हाँस्दै) अहिले केही वर्षदेखि भएको छैन । बूढो देखेर होला नि । अरु केटाहरुलाई भन्छ भन्छन् । मलाई त त्यस्ता केटी भेटेको भन्दा नभेटेकै जाति । अब त मान्छे चिनिसकियो, त्यस्ता खालका केटी आए भने जान्न भन्दियो । टेन्सनै साफ ।
ट्याक्सी चलाउन राति राम्रो कि दिउँसोमा ?
मलाई त राति नै राम्रो लाग्छ । त्यही भएर राति चलाएको छ । दिनमा जस्तो ट्राफिक जाम पनि हुँदैन रातिमा । नौ बजेपछि कमाई पनि डेढी हुन्छ ।
मिटर कत्तिको बिगार्ने गर्नुभएको छ ?
ककहाँ त्यस्तो गर्नु । मार्छ नि ट्राफिकले ।हाँ त्यस्तो नि ट्राफिकले ।
पैसा होइन सेक्स रोज्छु, सम्हाल्न सक्ने काे ? : रुवि शर्मा
खुमबहादुर पत्नी शिला भन्छिन्- ‘भगवानले तिनलाई माफी दिऊन्’
‘युट्युबबाट सेक्स सम्बन्धि ज्ञान लिन्छु’ : गायिका सिर्जु